Maamulka Inter Milan oo ka hadlay hadii doonistooda Romelu Lukaku ay tahay mid run ah? Halkeyse wax marayaan? – Gool FM
Abdirashid Mohamud July 12, 2019
(Milan) 12 Luulyo 2019. Kooxda Inter Milan ayaa xaqiijisay iney dalab rasmi ah u gudbiyeen dhigooda Manchester United, iyagoo ka doonaya weeraryahanka reer Belgium Romelu Lukaku.
Warbaahinta talayaniga ayaa baahisay in wakiilo ka socda kooxda Inter ay u duuleen dalka Ingiriiska si ay halkaas wadahadalo dhan walba ah ula yeeshaan wakiilada Red Devils, waxeyna weydiisteen hadii Lukaku looga iibin karo 85 Malyan oo Yuuro.
Agaasimaah ciyaaraha kooxda Piero Ausilio ayaa ka mid ahaa wafdigii Inter ee halkaas u duulay, kuwas oo Khamiistii kusoo laabtay gudaha talyaaniga.
“Waxaan Man United kala hadalnay arrinta Romelu Lukaku” ayuu yiri Piero Ausilio oo la hadlayay Sky Sport Italia.
“Waxey aheyd weydiisasho rasmi ah oo dhexmartay labada kooxood ee muhiimka ah, waan arki doonaa wixii dhaca, Conte wuxuu doonayaa xiddig walba, waana isku dayi doonaa inaan lasoo saxiixano” ayuu mar kale yiri.